Ministeera Barnootaa: 'Dhimma afaanii irratti wanti murtaa'e hin jiru' - BBC News Afaan Oromoo
'Roadmap' barnootaa haaraa mootummaan ifa godhe irratti dhimma aangoo naannoofi dhimma afaanii dabalatee wantooni ifa hin taane ijoo dubbii ta'anii jiru.
Turtii BBC waliin taasisaniin Ministirri Di'eetaa Ministeera Barnootaa Dr Garramuu Hulluuqaa dhimmoota falmisiisoo ta'an akka afaanii irratti wanti murtaa'e hin jiru jedhan.
Imaammanni barnootaa Itoophiyaa A.L.I bara 1987 bahe barnoota waliin gahuun milkaa'us, dhaloota dorgomaa uumuufi qulqullinaa barnootaa irratti hanqinoota qaba jedhu qondaalli kuni.
Kanaafis, wanta karaa agarsiisu, 'barnoonni biyya kanaa eessaa ka'ee eessa deema' kan jedhuf Roodmaappiin bahu isaa himan.
Waggaa darbe yeroo roodmaappin kuni ifa ta'u 'shakkii guddaa ummata keessatti uume,' kan jedhan Dr Garramuun ergasii 'marii taasifameen wanti sirrate hedduudha,' jedhan.
''Achi keessaa tokko dhimma afaanii akkatti qorattoonni yaadaniifi ergasii marii taasifameen, sirna federaalizimii bifa fakkaatuun qophaa'uu qaba kan jedhun irra-deebiin wantoonni ilaalaman jiru,'' jedhan.
Kanaanis, ogeessoonni dhimma barnootaa irratti qorannoo akka taasisan Ministeerri Barnootaa gochuu isaa himu.
Garuu ammas, ''federaalizimii, dhimma eenyummaafi, dhimma aangoo (naannolee) faana wal-qabatee wantoonni ammallee fuulduratti qulqullaa'u qaban akka jiran kan ilaalaa jirru,'' jechuun ibsu.
'Wanti murtii hin argatin jira'
Guyyaa kaleessa Ministirri Barnootaaa ibsa kennanin akkasumas Hogganaan Biiroo Barnoota Oromiyaa wanta BBC'tti himan giddu wanti waldarbu mul'ateera.
Dr Garramuun akka jedhanitti ibsi guyyaa kaleessaa ministirichaan kenname rodmaappiin akka hojiirra oolu beeksisuuf ture garuu wanti murtee hin arganne ka'u isaatti namni shakkii seene jedhan.
'Dokimantiin isaa ganaa sirriitti hojjetama,' kan jedhan Dr Garramuun dokimantii qophaa'e irratti 'afaan ykn afaanotni hojii federaalaa kutaa sadiitti jalqaba jedhamee kaa'ame,' jedhan.
Garuummoo, dhimmi kun aangoo naannoo fi federaala gidduu jiru irrattu gaaffii kaasa jedhu qondaalli kuni.
''Barnoota kutaa 1 - 8 afaan barnootaa kan murteeffatu naannoodha waan ta'ef inni kuni wanta ilaalamuu qabudha, ministeerri barnootaa irratti hojjetaa jira,'' jedhan.
''Tokkoffaa, kutaa 1 irraa (barnoonni Afaan Amaaraa) eegala hin jedhu. Inni dogongoradha. Kutaa sadaffaa jedha. Kutaa sadii kunuu sirriidha kan jedhu gaaffiidha. Inni waan sirratudha.''
Mirga naannoo waan ta'eef mootummaan federaalaa murteessuu hin danda'u kan jedhan qondaalli kuni, ibsi kaleessa kenname kan 'yeroo isaa eeggate miti' jedhaniiru.
Imaammata barnoota haaraa dhiyeenyatti hordofaa fi keessatti hirmaachaas nan ture kan jedhan qorataan kaarikulamii Dr. Firdiisaa Jabeessaa daa'imman ijoollummaatti erga takkaa afaan danuun barachuu hin danda'an jedhu.
''Seera sirna barnootaa pedaagojii keessatti daa'imman sadarkaa jalqabaarra jiran yoo baayyate afaan lamadha kan isaan qabatanii deemuun irra jiruu jedha.
''Sanaa ol ta'uun ammo dandeettii daa'immanii qaaccessanii yaaduu gadi qabuu danda'aa, ni joonjessas jedhamee qorannoon lafa kaahamee jira,'' jedhan.
Image copyright Tourism Oromia/FB
Goodayyaa suuraa Ministir Di'eetaa Ministeera Barnootaa, Dr Garramuu Hulluuqaa
Waggaa dhufus wanti hundu erga takkaa raawwata osoo hin taane dhawaata dhawaataan raawwata jedhan. Kanaafis, wanti murtoo barbaadu dursee furmaata akka argachuu qabu eeru.
Torban dhufu kora barnotaa Naannoo Somaalee magaalaa Jigjigaatti taa'amu naannoleen irratti argaman irratti dhimmi kuni ni mari'atama jechuun wanti kun 'akka sirratu abdiin qaba,' jedhan.
Osoo wanti hundi hin raawwatiin karoorri kuni ifa ta'un isaa garuu ammallee ifa miti.
Kutaan 8 qormaata biyyaalessaa ta'aa?
Dhimmi qormaata biyyaalessaallee aangoo naannolee ni dhiiba jechuun dubbatu Ministirri Di'eetaan kuni.
Hogganaan Biiroo Barnoota Oromiyaa qormaata kutaa 8 naannoomatu qopheessa, biyyaalessas miti jedhanii turan.
Qondaalli Ministeera Barnootaa kuni garuu wanti dokimantii imaammata Barnootaarra jiru kan biraa ta'uu himan.
'1 - 8 barattoonni afaan isaaniin baratu. Kutaan saddettaffaa qormaata biyyaalessaa ta'a. Qormaata garuu federaalatu qopheesse Afaan oromootti hiikama jedha,' jedhan.
'Gaaffiin akkanaa sadarkaa naannootti yoo ka'u isa jalqabaati'
Kunis aangoo naannoo ni dhiiba, dhimmoota kaan waliin ilaalama jechuun BBC'tti dubbataniiru.
Qormaatni kutaa 8ffaa sadarkaa biyyaalessaatti qophaayee afaan naannoleen ittiin barsiisuuf filatanitti hiikamee dhiyaata yaadni jedhu ''waan dhugaa hin fakaannedha'' jedhun kan qeeqan immoo qorataa afaanii Dr Firdiisaati.
Akka isaan jedhanitti Ministeerri Barnootaa aangoo naannolee cabsee 'asiin gadi ajajaa jira,'.
Caasaa barnootaa durii deebisuun furmaataa?
Qorataan kaarikulamii barnootaa Dr Firdiisaa Jabeessaa caasaa barnoota durii deebisuun dhimmicha gama hedduurraa osoo hin ilaaliin waan murtaa'edhaa jedhu.
ADWUI dura sirna ture keessatti dhuguma qulqullinni barnootaa tureera. Amma kan kufe sababa caasaan jijjiiramefis miti jedhu.
Sababoonni ijoo lakkoofsi barataa dabaluu, barnootni sadarkaa gadiitti kennamu laafuu, hamileen barsisaa cabuu fi hanqina gahumsaa hooggansati jedhan.
Gama kaaniin, barnootni seenaa darbee fi siyaasaan tuttuqamuunis sababoota biro ta'uu kaasu. Kanaafis, wanti 'tokko - shanee' inni jedhan barnoonni tasgabbii akka dhabu taasise jedhu. Wanti amma ta'aa jiru hojii yaaliiti jechuunis himatu.
'Kan ta'uun irra ture ogeessa akkamiiti kan barbaadamu jedhanii erga adda baasanii booda isaaf gahuumsa madaalu baasuun achiis gosa barnootaa galma kaahameen nama gahu fiduutu ta'uu qaba ture,' jedhan.
Gosa barnootaa 15
Dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti gosootni barnootaa 15 barattoota muummee hundaaf kennama isa jedhame ilaalchisee garuu hanqinoonni jiraachuu dubbatu qorataan kuni.
Gosootni barnootaa filataman kun caalatti bu'aa haala buusuu danda'aniin qophaa'uu fi fooyya'ani dhimmoota dabalachuu qaban biroon turanii jedhan.
Akka fakkeenyatti barnoota 'Critical thinking' jedhu caala osoo logic fidanii, bakka Anthropology studies of cultures and people of Ethiopia ykn ethnography of Ethiopia,'' jedhamee irra gaarii turee jadhan.
Gosoonni barnootaa tokko tokko (fkn intarpriinarship) haala qabatamaa muummeewwan barnootaa garaagaraa jiranitti kan madaqfamuu hin dandeenye ykn osoo hin madaqfamiin dhiyaachuun rakkoo biraa ta'uu himan.
''Kana kana gaafan ilaalu waan ariifataniif qabu natti fakkaata ykn mootummaan kun dhaabbata mataa isaa fi sirna mataa isaa sadarkaa federaalaatti hin qabu na jechisiisa,'' jechuun dubbatu.